Wararka Wargeyska OGAAL: Diblomaasiyiin iyo Ganacsadeyaal Faransiis ah oo ka xog-waramay ujeedada socdaal ay ku joogaan Hargeysa | Somaliland.Org
January 31, 2009	Hargeysa (Ogaal) – Diblamaasiyiin iyo Ganacsadayaal Faransiis ah ayaa shalay Booqasho ku yimi dalka Somaliland, Islamarkaana waxa ay sheegeen in ujeedadooda socdaalkoodu la xidhiidho arrimo ganacsi iyo ka qayb-gelka bilowga Xafiis Baan BCIMA oo Faransiis ahi ka furaynayo Hargeysa.
Sheekh Shariif oo loolan adag ka dib ku guuleystay Madaxweynenimada Somaliya
Jabuuti (RTD/Ogaal)- Baarlamaanka dib u habeynta lagu sameeyay ee dawladda Kumeel-gaadhka Soomaaliya, ayaa xalay niskii dambe Madaxweyne cusub u doortay hogaamiyihii isbahaysiga dib u xoreynta Garabka Djibouti Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ka dib markii uu dhowaan xilkaa iska casilay Cabdillaahi Yuusuf Axmed.
Doorashadan oo ay loolan adag u galeen inka badan toban Murashax, waxaa goob-joog ka ahaa Raysal-wasaaraha Jabuuti, Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Diblomaasiyiin ka socda dalalka Shisheeye, wakiilo ka socday hay’addo, ururo Caalami ah iyo shaqsiyaad kale. Iyadoo wareegii saddexaad ay 126 xubnood oo ka mid ah 425 Xildhibaan oo fadhigaa ka qaybgalay u codeeyeen Maslax Maxamed Siyaad Bare, halka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo u baahnaa kaliya kala badh xildhibaanadu uu helay ku dhawaad 300 oo mudane (293) Aroortii hore ee saaka, iyadoo codbixintu jiitameysay ilaa fiidkii hore ee xalay.
Coddaynta doorashadan oo ka socotay Guriga Umadda ee Jabuuti, waxay Xildhibaanada isku-dhafka ah ee awood-qaybsiga Xukuumadda TFG iyo Mucaaradka qayb ahaan ku dhisani gudo galeen fiidkii xalay.
Jewigii Shirka iyo qaabkii codbixinta:
Fadhiga Baarlamaanka ee doorashada Madaxweynaha cusubi, wuxuu ku bilaabmay, islamarkaana uu ku socday ilaa gabagabadii jewi degen. Guddiga Doorashadu waxay diyaariyeen dhammaan agabkii doorashada lagu gelayay, sida waraaqihii codbixinta. Sidoo kale, waxaa la diyaariyay hawlwadeenada kale ee doorashada ka shaqaynayay.
Doorashadu waxay ahayd mid qarsoodi ah, waxaana la dhigay 4 Sanduuq oo Quraarad ka samaysan, kuwaasoo dhammaantoodba qufulo saarnaayeen, waraaqaha codbixintana lagaga ridayay jeexdin yar oo liid ah oo loogu talogalay. Xildhibaan kasta marka uu codaynta dhiibanayay, waxay Guddigu yeedhinayeen magaciisa, ka dibna marka ay Kaadhkiisa aqoonsiga arkaan waxay siinayeen waraaqda Codbixinta. Iyadoo doorashadan si toos ah loogala socday T-v-yada daafaha dunida. Markii ay dhammaatay codbixinta wajigeedii koowaad, Murashax kastaa wuxuu soo magacaabay xubin wakiil uga noqota tirinta iyo la socoshada wareegyada dambe ee codaynta. Guddiga Doorashad ayaa ka codsaday Guddoomiyaha Baarlamaanka, ahna sii-hayaha xilka Madaxweynenimo Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sh. Madoobe) inuu u furo Sanaadiiqda, kuwaasoo uu Fureyaashooda sitay, wuxuuna mid mid Guddiga ula tiriyay codadkii Murashaxiintu kala heleen. Murashaxiinta wareegii koowaad galay iyo tirooyinkay kala heleen:
Wejigii u horeeyay ee coddaynta doorashada, waxaa tartanka Madaxweynenimada ka qaybgalay 11 Murashaxa, halka kuwo kalena ka tanaasuleen ka hor intii aanay coddayntu bilaabmi. Murashaxiinta Xildhibaanadu wareegii koowaad u coddeeyeen oo shan ka mid ahi kaalinta koowaad ku hadheen, waxay wareegii u horeeyay codadka Xildhibaanada u kala heleen sidan;
1. Axmed Xaashi Maxamuud 9
2. Cali Xaashi Dhoore 2
3. C/raxmaan Cabdi Xusseen (Guul-wadde) 10
4. Cali Khaliif Galaydh 31
5. Cawad Axmed Cashara 5
6. Maslax M. Siyaad 60
7. Maxamed Cismaan Aadan Edsan 25
8. Muuse Macalin Yuusuf 4
9. Nuur Xasan Xusseen (Nuur-cadde) 59
10.Shariif Sh. Axmed 215
11.Yuusuf Cumar Azhari 2
Iyadoo sida Guddigu ku dooday ay saddex cod oo keliyi xumaadeen. Markii ay dhammaatay tirinta codadkii Murashax kastaa ka helay wareegii koowaad ee codbixinta, isla markaana uu cod-bixinta ku hogaaminayay Sheekh Shariif Sh. Axmed, Guddoomiyaha Baarlamaanku waxa uu ku dhawaaqay in lix Musharax ku guulaysteen inay u gudbaan tartanka wareega labaad, kuwaasoo kala ah; 1. Shariif Sh. Axmed 2. Maslax Maxamed Siyaad Barre
3. Nuur Xassan Xusseen (Nuur-cadde)
4. Dr. Cali Khaliif Galaydh
5. Maxamed Cismaan Aadan
6. Cabdiraxmaan Cabdi Xusseen (Guul-wadde).
Waqtigaa goor-sheegtu waxay dulsaarnayd 12:30 habeenimo. Sidaa darteed, Guddiga doorashadu waxay mudaneyaasha ku wargeliyeen inay u dareeraan 15 daqiiqo oo nasasho ah, si ay Guddi ahaan u sii diyaariyaan waraaqaha codbixinta wareega labaad. Laakiin, waxaa durbadiiba ku dhawaaqay in aanay tartanka wareega labaad ka qaybqaadanaynin laba ka mid ah lixdii Murashaxa ee u gudbay wejiga labaad, kuwaasoo kala ah Dr. Cali Khaliif Galaydh iyo Nuur Xassan Xusseen (Nuur-cadde). “ Wax badan baa la ina dhaliilay, laakiin caawa wax fiican baynu qabanay. Waxaan jeclahay in aan ka tanaasulo inaan u gudbo doorka labaad, si aan hawsha u dedejiyo.” Sidaa waxa yidhi Dr. Galaydh. “Waan tanaasulay…Doorashadu si wanaagsan bay u dhacday….Waa run oo inta u gudubtay wareega labaad baan ka mid ahaa, laakiin markaan qiimeeyay xaaladda, arkaynay in hawshu ku fiican tahay in la dedejiyo, isla markaana aan isleeyahay guushu waxay u dhowdahay cid aan aniga ahayn, ayaan u tanaasulay. Laakiin, diyaar baan u ahay in aan la shaqeeyo cidii soo baxda iyo in nabaddii aan bilaabay aan sii wado.” Sidaana waxaa ku dhawaaqay Nuur Xassan Xusseen oo ah sii-hayaha Raysal-Wasaaraha Soomaaliya.
Xod-xodashada iyo loobinka hoose ee Murashaxiintaa isu soo hadhay darteed, 15 daqiiqo ee loo qabtay in Xildhibaanadu ay ku soo laabtaan waqtigu wuu ka batay, markii laysu soo laabtayna waxaa ku dhawaaqay inuu tartanka ka hadhay Murashax Cabdiraxmaan Cabdi Xusseen (Guul-wadde). Hase yeeshee, Guddiga doorashada ayaa iyana dhinacooda shaaciyay in Musharax Maxamed Cismaan Aadan (Edson) u caddeeyay in aanu Hoolka Shirku ka socdo ku soo laabanaynin. Sidaa darteed, Guddoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Aadan-Madoobe, ayaa ku dhawaaqay in wareega labaad ee tartanka laga boodayo, loona gudbayo wejiga saddexaad ee tartanka maadaama ay labada Murashax ee Sh. Shariif iyo Maslax Maxamed Siyaad Barre oo keli ahi isku soo hadheen, taasoo uu xusay inuu dhigayo nidaamka iyo Xeer-hoosaadka Baarlamaankoodu, ka dib markii ay meesha ka baxeen afar ka mid ah lixdii Murashax ee wareega labaad u gudbay. Kembesi ayaa maanta lagu qabanayaa xaflada caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Somaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Dr Gaboose oo ka xog-waramay safar uu ku tegay Maraykanka
“Doorashadu hadday xilligeedii dib uga dhacdo, waqtigii Rayaale-na halkaas buu ku dhamaaday”
Hargeysa (Ogaal)- Guddoomiyaha urur-siyaasaddeedka Qaran ee dhowaan heshiiska iskaashi la galay xisbiga KULMIYE Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, ayaa shalay gelinkii dambe dalka dib ugu soo laabtay ka dib markii uu soo dhammaystay socdaal muddo bil ka badan qaatay oo uu ku tegay dalka Maraykanka.
Dr. Gaboose oo ay Madaarka Hargeysa ku soo dhaweeyeen Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaas, waxa uu sheegay in Diblomaasiyiin Shisheeye ah iyo Jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan Maraykanka oo kulan la yeeshay inuu xog-waran ka siiya xaaladda guud ee haatan dalka ka jira. Isla markaana waxa uu tilmaamay in haddii doorashada Madaxtooyadu waqtigii loo cayimay dib uga dhacdo, inay hoos u dhigayo sumcada Somaliland ku leedahay beesha Caalamka. “Hadda waxaan maqnaa ugu yaraan muddo afartan maalmood ah. Waxaan muddadaas joogay dalka Maraykanka, waxaanan tegay dhowr gobol oo ka mid ah kuwa waa weyn, kuwaasoo Jaaliyadda Somaliland ku badan yihiin…Dalkaasi waa dal weyn oo dad nooli degen yihiin. Dadka nool waxaan ka wadaa; waa dad garanaya xuquuqdooda iyo xaqa dadku ku leeyahay…Dadka Somaliland ee aan halkaas kula kulmay, waxaan siiyay xogta dhabta ah ee dalka taala ee ah; dhibaatada dalka taala, shaqo la’aanta taala, sharci-darada taal, Maamul xumida taal, Musuq-maasuqa yaal iyo dawlad xumida taal. Waxa kale oo aan uga warbixiyay in la marayo xili doorasho. Sidaa darteed, doorashadani waa mid aad muhiim u ah, waayo masuuliyiin badan oo ajanabi ah oo aan la kulmay iyo cid walba oo aad la sheekaysataa waxaad moodaa inay doorashadan ku qiimaynayaan Somaliland inay talaabo weyn qaadi doonto, hadday ku dhamaaato si Nabdgelyo ah, xor oo xalaal ah oo si wanaagsan laysugu hibeeyo. Wax kasta oo carqalad ah oo doorashadaas ku yimaada waxaan hubaa inay maqaamkeenii hoos u dhigi doonto. Markaa shacbiga waxaan ugu baaqayaa in la dareemo oo ay qiimeeyaan in doorashadu waqtigeedii ku dhacdo, oo aan laga yeeli marmar siinyo yaryar. Sidaa darteed, doorashadu inay waqtigeedii ku dhacdaa waa muhiim, waayo haddii aanay waqtigeedii ku dhicina waqtigii Rayaale-na halkaas bay ku dhammaatay, mana qabo Anigu in sharciyad dambe oo kala hagaysa dadku imanayso.” Sidaa ayuu yidhi Dr. Gaboose oo qolka Nasashada ugu waramay Saxaafadda maxaliga ah. Wuxuuna faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalka uu ku tegay Maraykanka. “Waxaan u tegay halkaas in aan taageerayaasha ururka Qaran uga sheekeeyo heshiiskii wanaagsanaa ee na dhexmaray anaga iyo KULMIYE, ugana waramo waxa uu salka ku hayo…Dadkaa aan halkaas ugu tegay, waxay ahaayeen kuwo codkooda, jeebkooda iyo gacantoodaba in Alle hala qabteen odayga Musharaxa ah ee Axmed-Siilaanyo inuu ku guulaysto (Madaxweynenimada) diyaar u ah,” ayuu yidhi Guddoomiyaha urur siyaasaddeedka Qaranka.
Mar la waydiiyay waxyaabihii uu kala hadlay Waaxda Arrimaha Dibadda Maraykanka iyo cida uu kala kulmay, waxa uu ku jawaabay “Waxaan kala kulmay Wasaaradda raga ugu sareeya ee qaybta Afrika xukuma ee aan siyaasiyiinta ahayn. Waxaanu kulanay ninka Afrika oo dhan xukuma, ka Afrikada bari xukuma iyo Geeska Soomaalida ninka xukuma intaba. Marka koowaad, markii nala xidhay halkan (Hargeysa) Jendayi Frazer baa nagula kulantay, waanay na qiimeeyeen, Aniguna waxaan is idhi aad ku tidhaahid ‘Mahadsanid’. Midda labaadna, waxay ahayd barasho, ta saddexaadna waxay ahayd xaaladdan dalku ku jiro, doorashadan iyo siyaasadda guudbain aanu iska waraysano. Runtii waxaan la kulmy dad aad u jecel Somaliland, lana jecel in doorashadaasi (tartanka Madaxtooyada ee 29 March, 2009) inay guul ku dhammaato. Marka wax aynu inagu iska xumayno mooyee, xagaa (Maraykanka) waa naylaga jecel yahay.”
Mar la waydiiyay waxa ka jira warar sheegayay in midaynta taageerayaasha Qaran iyo KULMIYE ka sokow, socdaalkiisa Maraykanka ay qayb ka ahayd dhaqaale ururin ku saabsan in la xoojiyo maaliyadda xisbiga KULMIYE ololaha doorashada ku gelayo, waxa uu yidhi, “Walaahi, markii aanu heshiiska galay waxaanu balanqaaday in aanu Qoraxda iyo Barafkaba u marno sidii uu ku soo bixi lahaa xisbiga KULMIYE, waayo himiladayadii iyo tii dadka ayaanu ka dhex aragnay. Markaa adigu lacag baad sheegaysaaye wax kasta waanu doonay.”
“Waxaan u arkaa in Beesha Sool UCID ka heshay wax aanu ku qanacno” Prof. Cabdiraxmaan X. Saalax….Masuulka UCID u magacaabay xilka Raysa-wasaaraha…Waraysi gaar ah
Hargeysa (Ogaal)- Prof Cabdiraxmaan Xaaji Saalax Xassan oo ah Masuulka xisbiga UCID u magacaabay inuu qabto xilka Raysal-wasaaraha haddii ay xisbi ahaan ku guulaystaan doorashada soo socota, ayaa sheegay in beeshiisa gobolka Sool ku qanacsan tahay xilkaa iyo xilal muhiim ah oo xisbiga laga siiyay.
Mr. Cabdiraxmaan Xaaji Saalax oo doraad u waramay Weriyayaal ka tirsan Wargeyska Ogaal iyo Idaacadda VOA-da, waxa uu tilmaamay in aanay beesha gobol Sool wax dhib ah u arag haddii laga guulaystay Murashaxii Madaxweyne Ku-xigeenka ee gobolkaas ka soo jeeda, maadaama xisbiga laga siiyay xilal kale oo muhiim ah. “Haddii aan ka hadlo arrintaas, maanta (doraad) Kal-fadhigii wuxuu ku dhammaaday si guul ah, iyadoo ay dad badani ka soo qaybgaleen. Guushaa shirku ku dhammaaday waxay ahayd in la helo Madaxweynaha, Madaxweyne Ku-xigeenka iyo Raysal-wasaarihii, iyadoo uu Madaxweynihii (u tartami lahaa UCID) loogu doortay Inj. Faysal Cali Waraabe, Madaxweyne Ku-xigeenkana loogu doortay Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xassan, Aniga iyo beeshaydu ku qaadanay Raysal-wasaarihii, taasina waxay muujinaysaa in si siman loo qaybsado Maamulki dawladda. Jewi ahaan Shirku si wanaagsan buu u dhacday, kollayna waa laga wada dhegaystay dibaddaha, Somaliland iyo Soomaaliya intaba, waxaanan filayaa inay hambalyo u hayaan. Anagu waxaan doonaynay waxay ahayd uun, maadaama Somaliland maanta xisbiyo gaadhay in la helo xisbi Caddaalad, Kitaabka Illaahay iyo Sunihii Nebiga ku shaqeeya, kaasoo aanu uga dhawaanayno inay maanta ku samata baxaan dadka Somaliand.” Sidaa ayuu yidhi Prof. Cabdiraxmaan Xaaji Saalax oo wax laga waydiiyay sida uu u arko jewiga uu ku dhammaaday Shirkii Golaha Dhexe ee xisbiga UCID, kaasoo doraad la soo gebogabeeyay. Mar la waydiiyay in xilkaa loo magacaabay meesha ka saarayso cabasho ergooyinka gobolka Sool ee Shirkii Golaha Dhexe ka qaybgalay ka muujiyeen qaabkii lagu reebay Murashax Dr. Cali Caydiid Xassan, laguna doortay Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xassan, waxa uu ku jawaabay, “Horta, haddii doorasho dhacdo cadho way iska samaysantaa, taasina waxay ka dhacaysaa waa wax kooban, haddii layska dhaqdhaqana waa lagu kala bogsanayaa. Waxay ila tahay doorashadii Murashaxiinta ee dhacday, waxay ahayd mid Dimoqraadiyadi keentay in dadna wax yeelaan, kuwo kalena wax diidaan. Markaa taas hore way dhammaatay, tan maanta ee laygu doortay markii looga soo gudbayna, waxay noqotay in anaga (reer Sool) nala siiyo Guddoomiyaha Golaha Wasiirada iyo xilal kale oo muhiim ah, haddii UCID ku guulaysato doorashada iyo weliba in wax nalaga siiyo xisbiga laftiisa oo aanu xubno muhiim ah ka qaadano. Waxaanu hogaanka xisbiga ku heshiinay in xilalka muhiimka ah nala siiyo oo aanu beesha (Dhulbahante) u helo. Markaa waxay ila tahay marka aan dhakhso gobolka ugu laabto, beeshana wada hadalo waanu ku qancaynaa. Laakiin, maaha in aad hesho meeshii aad markii hore doonaysay, haddii aad waydana ugu yaraan waa inaad heshaa wax dadkii ku qancaan, adiguna ku qanacdo. Sidaa darteed, waxaan u arkaa in aanu helay wax aan ku qanacnay.”
Guddoomiyaha KULMIYE oo ka hadlay sida ay tahay kalsoonida ay ku qabaan Komishanka doorashooyinka
Hargeysa (Ogaal)- Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa caddeeyay in xisbi ahaan ay kalsooni buuxda ku qabaan hawlgudashada xubnaha sare Komishanka doorashooyinka.
Axmed-Siilaanyo oo markii uu shalay Dr. Gaboose ku soo dhaweeyay Madaarka Hargeysa Saxaafaddu waydiisay su’aal la xidhiidha inta ay le’eg tahay kalsoonida ay xisbi ahaan ku qabaan Komishanka, waxa uu xisbiyada UCID iyo UDUB ugu baaqay inay iyana kalsoonida taas la mid ah u muujiyaan Guddiga doorashooyinka, taasoo uu xusay inay wanaajinayso rajada beesha Caalamka ee doorashooyinka Somaliland. “Waxaan doonayaa in aan halka ka caddeeyo haddii aanu xisbiga KULMIYE nahay in aanu kalsooni ku qabno Guddiga doorashooyinka. Kacaa-kuf badan waa la soo maray, wax ay dhaliil lahayn iyo cid aan dhaliili ka imanina ma jiro. Laakiin, maanta waqtiga aynu taagnahay ee aynu ka wada hadlayno ee aynu doorashada qarka u saaranahay, hay’adda sharciga ah ee jirta ee u xilsaarani waa iyaga (Guddiga Doorashooyinka), iyana siday inaga codsadeen ee ay yidhaahdeen; waxaanu la garab taaganay kalsooni buuxa iyo taageero. Sidaa darteed, waxaanu ugu baaqaynaa axsaabta kale inay sidaa si le’eg iyana kalsoonida loo baahanyahay siiyaan, si doorashadu u hagaagto una rajo geliso Caalamka.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Dhinaca kale, Guddoomiye Ku-xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo shalay ka soo laabtay safar muddo qaatay oo ugu maqnaa dalka Kenya, waxa uu sheegay inay martiqaad ka heleen dalal ka tirsan Bariga Afrika, taasoo uu xusay inay dhowaan u bixi doonaan masuuliyiin ka tirsan xisbigaas. “Waxay ila tahay oo aan aaminsanahay, haddii doorashadaasi (doorashada Madaxtooyada ee 29 March 2009) sida wanaagsan ee aynu doonayno inoogu dhacdo oo aan carqalad lagu samaynin oo aanay dib u dhicin, Somaliland inay talaabo aad u wayn qaadi doono. Hadda Jabuuti baan soo maray oo aan xalay (habeen hore) u soo hoyanay, waxaana halkaas ka socda shirkii arrimihii Soomaaliya, waxaananu Ilaahay ka baryaynaa inay halkaas ka dhalato dawlad wanaagsan oo ay ku kalsoon yihiin. Laakiin, waxaad moodaa rajada laga qabo inay walaac badani ku jiro.” Sidaa ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo qolka nasashada ee Madaarka Hargeysa Saxaafadda kula hadlayay.
“Cabasho waxba inoo tari maysee ficil baa loo baahanyahay, waxaananu caddaynaynaa in aanu taageersanahay KULMIYE”
Suldaan Daair Xassan Khaliif
Hargaysa (Ogaal)- Suldaan Daakir Xasan Khaliif oo ka mid ah Salaadiinta Beelaha Somaliland, gaar ahaan kuwa Lahayb-sooco, ayaa sheegay in isaga iyo beeshiisuba si buuxda u taageerayaan xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE, kaasoo uu xusay inuu yahay xisbiga ay ka helayaan xaqa ay u leeyihiin inay ka qayb galaan talada dalka.
Suldaan Daakir Xasan Khaliif oo shalay shir jaraa’id ku qabta Hargeysa, waxa uu sheegay in beelaha Gabooye aanay wax saami ah ku lahayn xukuumadda haatan jirta. “Dadka Gabooyaha ah oo tiradoodu badan tahay, waxay Xukuumadda jirta ku leeyihiin hal Wasiir ku-xigeen,” ayuu yidhi. Mar uu si gaar ah ula hadlayay shacabka beeshiisa, waxa uu yidhi “Wasiir buuxa ayaydaan ku lahayn, Baarlamaan ayaydaan ku jirin, hay’addaha Garsoorka Xaakin kuma lihidin, Xaakim kuma lihidin guud ahaan gobolada Somaliland, Boolisku waa la mid inta gobol ee dalku leeyahay oo Taliye Saldhig kuma lihidin iska daa Taliye Qaybeed iyo meel kale oo ka saraysa’e.” Wuxuuna intaa raaciyay “Qofku waa in uu baraarugo oo maskaxda ka shaqaysiiyo, si aynu uga muuqano hay’ad kasta oo dalku leeyahay; cabashana waxba inoo tarimayso. Laakiin, ficil baa loo baahanyahay, haddii aynu meel kasta waanu dulmanahay la istaagno cidna waxba inoo qabanmayso. Sababtoo ah, dalku waa dalkeenii, waa in aynu cidii wax inoo qabanaysa ee intaas aan tilmaamayba inaga qayb gelinaysa, waa in aynu u hurnaa codkeena, dadnimadeena, maskaxdeena iyo maalkeena. Markaa waxaan idiin sheegayaa intaas aan tilmaamay in xisbiga ina siin karaa uu yahay Xisbiga KULMIYE.”
Suldaan Daakir Xassan Khaliif waxa uu baaq u jeediyay guud ahaan beelaha Lahayb-sooco. “Aniga oo ku hadlaya afka Beesha Madhibaan oo aan Suldaan u ahay, Beelaha kale ee walaalahay ah waxaan leeyahay nimanyahow taladaa qaata oo fikirkaa aanu idiin soo jeedinay nala eega. Anagu haddii aanu nahay beesha Madhibaan waxaanu cadaynaynaa in aanu taageernay kana mid nahay xisbiga KULMIYE, oo aanu ka helayno xaqayaga.” Sidaa ayuu yidhi Suldaanku.